Shiinaha Customized boorsada boorsada Anti-xatooyo saarayaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > Boorsooyin > Boorsada kumbuyuutarka > Boorsada Laptop-ka ee la-dagaallanka xatooyada
(1) Boorsadan Laptop-ka ah ee kahortaga xatooyada waxay leedahay astaamaha astaamaha biyuhu, culeyska hoos u dhaca, nuugista shoogga, xirashada iska caabinta, cimri dhererka shaqada, iyo shaqooyinka badan. laptop-ka iyo agabyada dhinacyada sida kumbuyuutarka, jiirka, U diskiga, moobilka moobilka, iwm inta lagu jiro gorgortanka ganacsiga, shaqada, safarka, safarada ganacsiga iyo xilliyada firaaqada. (3) Lagu sameeyay alaab ceeriin oo heer sare ah, sheyga wanaagsan waa inuu noqdaa mid aan laga sooci karin (4) Waxaan ku qalabeynay boorsadan laptop-ka ah ee la dagaalanka xatooyada kumbuyuutar leh quful qufulka ka hortaga, kaas oo si wax ku ool ah uga ilaalin kara waxyaabahaaga muhiimka ah in laga xado meelaha dadku ku badan yahay. (5) Marka labaad, boorsadani waxay leedahay naqshad deeqsi ah oo moodle ah, oo ku habboon dhammaan dadka waaweyn.
Boorsada Laptop-ka anti-xatooyada anti-xatooyada
1. Hordhaca boorsada laptop-ka ee la-dagaallanka xatooyada lidka ku ah tuugada:
(1) Dharka kore ee boorsada la dagaalanka tuugada ee ka hortagga xatooyada ayaa ka sameysan 1680D dharka nylon ballistic-ga ah. Qalabkani wuxuu leeyahay xoog silig xoog leh, iyo tikniyoolajiyaddiisa gaarka ah ee dharka ayaa ka dhigaysa mid aad u adag oo u adkeysata, cufnaanta dharka sare iyo dahaadhka biyuhu lakabka ayaa si wax ku ool ah uga hortagi kara biyaha roobka inay ku ridaan bacda. Isku darka tiknoolajiyada dharka sare leh iyo dahaadhka biyuhu waxay ka dhigeysaa inay leedahay waxqabad wanaagsan oo aan biyuhu lahayn iyo dhalaal sharaf leh. Waxqabadka biyuhu wuxuu gaari karaa: IPX3 ama IPX4.
(2) Gudaha waxaa laga sameeyaa 210D dheeman lattice nylon Oxford maro, kaas oo leh muuqaal dhalaalaya. Qalabkan waxaa badanaa loo isticmaalaa soo saarista bacaha buuraha, sidaas darteed maaddadu waxay leedahay kalsooni aad u sarreeya.
(4) Buuxinta gudaha waxay ka sameysan tahay suuf EPE ah oo laastik ah. Qalabkani waa mid khafiif ah, u adkaysi u leh shoogga, oo si wax ku ool ah u ilaalin kara waxyaabaha bacda ku jira.
(5) Shandadeena laptop-ka ee ka hortagga xatooyada waa neefsasho, xirasho u adkaysata, biyo-la'aan iyo yareynta culeyska Waxay qaadi kartaa 15.6-inji oo laptops ah iyo qalabyada durugsan.
(6) Boorsadeena laptop-ka ee la-dagaallanka xatooyada waxaa ku qalabaysan boorso goonni ah oo gooni ah, taas oo ilaalinaysa kombuyuutarkaaga sidoo kalena leh adeegsi madax-bannaan
(7) Boorsadan laptop-ka ah ee la dagaalanka xatooyada ayaa qaadatay tiknoolajiyad ka dhan ah xatooyada waxaana lagu qalabeeyaa furaha furaha, kaas oo si wax ku ool ah uga hortagi kara halista waxyaabaha muhiimka ah ee lagu xado saldhigyada basaska, saldhigyada tareenada, garoomada diyaaradaha ama meelaha dadku ku badan yahay.
(8) Waxaan sidoo kale ku qalabeynay qalabkan qalab heer sare ah oo qalab ah, si sheygan uusan ugu muuqan mid rakhiis ah marka loo eego qalabka wax soo saarka iyo farsamada gacanta.
(9) Waxaan sidoo kale iswaafajinay boorsadan laptop-ka ladagaalanka xatooyada ah ee maqaarka microfiber PU maqaarka ufiican si looga dhigo mid heer sare ah.
2. Xuduudaha alaabta (qeexitaanada) shandada laptobka ee ka hortaga tuugada
Waqtiyada firaaqada, shaqada, safarka, safarka ganacsiga, ganacsiga
1680D naylon ballistic
210D naylool xarig dheeman
Dhererka 30cmX Width 20cmX Dhererka 46cm
3. Astaamaha iyo codsiyada boorsada laptop-ka ee la-dagaallanka xatooyada
(1) Boorsadan laptop-ka ah ee xatooyada kahortaga waxay leedahay astaamaha biyuhu, culeyska hoos u dhaca, nuugista shoogga, iska caabbinta, nolosha adeegga muddada dheer, iyo shaqooyinka badan.
(2) Waxaad u isticmaali kartaa boorsadan laptop-ka ah ee la dagaalanka xatooyada si aad si fudud ugu kaydiso laptop-kaaga shaqada iyo qalabka agabka ah sida kiiboodhka, jiirka, U diskiga, moobilka moobaylka, iwm.
(3) Lagu sameeyay alaab ceeriin ah oo heer sare ah, sheyga wanaagsan waa inuu noqdaa mid aan laga sooci karin alaabta ceeriin oo tayo sare leh iyo tikniyoolajiyad wax lagu tolo oo fiican.
(4) Waxaan ku qalabeynay shandadan laptop-ka ah ee anti-xatooyada ah quful qufulka ka hortaga, kaas oo si wax ku ool ah uga ilaalin kara waxyaabahaaga muhiimka ah in laga xado meelaha dadku ku badan yahay.
(5) Marka labaad, boorsadani waxay leedahay naqshad deeqsinimo leh oo moodle ah, oo ku habboon dhammaan dadka waaweyn.
5. Baakad iyo keenista boorsada laptop-ka ee la-dagaallanka xatooyada
(6) Sanduuqayaga shirkadda wuxuu si joogto ah u ansax yahay oo ay maamulaan shaqaale xirfadlayaal u ah adeegga macaamiisha. Waad noo soo qori kartaa talo iyo cabasho wakhti kasta. Waxaan u aqrin doonnaa una soo jawaabi doonnaa si hufan oo taxaddar leh.
Waxaan nahay warshad, warshaddeenuna waxay leedahay aag la isticmaali karo oo dhan 18,000 oo mitir murabac ah.
Haddii sheygan lagu heli karo keyd, badanaa wuxuu qaataa 3-5 maalmood. Ama, haddii aysan jirin tiro koob, waa 35-45 maalmood, iyadoo ku xiran tirada aad u baahan tahay. Markay tiradu badato, ayaa sii dheeraanaya wareegga waxsoosaarka.
Haa, waxay kuxirantahay cabirka, farsamada gacanta iyo habka wax soo saar ee sheyga.
Calaamadaha kulul: Boorsada Laptop-ka-xatooyada kahortaga, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka